FAA na-amanye Verizon na AT&T ka ha kwụsị ibugharị 5G zuru oke
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » FAA na-amanye Verizon na AT&T ka ha kwụsị ibugharị 5G zuru oke
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
FAA na-amanye Verizon na AT&T ka ha gbuo oge mbugharị 5G zuru oke.
Federal Aviation Administration na-adọ aka ná ntị na ịgbasa n'ime ụfọdụ bandwit ga-akpachi anya nke ọma na bandeji eji maka nchekwa ụgbọ elu.
Mbugharị nke Disemba 5 a zubere n'ofe C-band ga-egbu oge ruo opekata mpe Jenụwarị 5.
Verizon na AT&T na-atụ anya ịrụkọ ọrụ na FAA iji gboo nchegbu ya gbasara nnyonye anya nwere ike ime na akụrụngwa nchekwa kokpiiti.
Njem ụgbọ elu na US enweelarị nsogbu n'oge na-adịbeghị anya, na-enwe agụụ mgbe ọgbaghara na-efe efe na-emegide ndị ọrụ na ụkọ ụgbọ elu.
Verizon na AT & T'Ezubere na Disemba 5 zuru oke 5G mpịakọta, nke na-enye "ezigbo ọsọ" n'ofe etiti nke ụdịdị ụdị redio, egbuola oge ka emechara. FAA dọrọ aka ná ntị na ụfọdụ mgbasawanye bandwit ga-egbochi nke ukwuu na ndị agha eji maka inye nchekwa ụgbọ elu azụmahịa.
Mbugharị n'uju n'ofe C-band ga-egbu oge ruo opekata mpe Jenụwarị 5, AT&T na Verizon mara ọkwa.
Companieslọ ọrụ ndị ahụ na-atụ anya ịrụ ọrụ na ndị Federal Aviation Administration iji gboo nchegbu ya gbasara nnyonye anya nwere ike ime na akụrụngwa nchekwa kokpiiti nke na-ejikwa band C.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ndị ahụ wepụrụ ijeri $ 70 jikọtara ọnụ iji nweta C-band n'ahịa ọrịre na mbido afọ a, ụlọ ọrụ ụgbọ elu ekwupụtala iji ya eme ihe, na-arụ ụka na "enwere ike ịtụ anya nnukwu nsogbu iji National Airspace System" Ndị na-eweta ya na-enweta dibs na bandwit ahụ maka 5G ha.
Companieslọ ọrụ ndị ahụ enweelarị njikọ 5G dị elu na ọnụ ọgụgụ dị elu, ebe ha na-eji teknụzụ milimita, yana ugboro ole dị ala, nke na-apụta nwayọ nwayọ. Ọ bụ ezie na ha abụghị naanị ụlọ ọrụ abụọ na-ebupụ 5G, onye na-asọmpi ha T-Mobile ewepụtalarị nnukwu ihe dị n'etiti ụdịdị nke na-adịghị arụ ọrụ na C-band.
O doro anya na ụlọ ọrụ ụgbọ elu na-anwa ịdọrọ uche nke ụlọ ọrụ ekwentị ruo oge ụfọdụ ugbu a, na-enwe nzukọ n'August na Federal Communications Commission iji dọọ aka ná ntị banyere esemokwu na-abịa n'etiti mpaghara abụọ ahụ. Ọ gwụla ma emeghị ihe, ha dọrọ aka ná ntị, a pụrụ ịtụ anya 'oke ọgba aghara', na-amanye ndị ahụ FAA iji 'belata nke ukwuu ikike ịrụ ọrụ ụgbọ elu.'
N'ịbụ ndị na-emeghị ka ndị ọzọ kwenye na ọ dị ngwa ngwa nke okwu ahụ, FAA wepụtara 'akwụkwọ ozi pụrụ iche' na mbido izu a na-akọwapụta nnyonye anya 5G nwere na ngwaike nchekwa ụgbọ elu nke dabere na ịnweta redio altimeters. Ruo n'izu a, ụlọ ọrụ ahụ zubere ịnye iwu gọọmentị na-amachi iji sistemụ akpaaka, gụnyere nke na-enyere ndị na-anya ụgbọ elu aka ife efe na ịdaba na ihu igwe ọjọọ. Emebere mmachibido iwu ahụ iji gbochie ndabichi ọ bụla sitere na akara 5G ịbanye na bandwit ha, ebe a na-atụ anya ka ndị ọrụ 5G wepụta teknụzụ ha na Disemba 5 gafee ahịa 46.
Ọ bụ ezie na-ekwenye na enwebeghị okwu ọ bụla nke 'nnyonye anya na-emerụ ahụ' na 5G na mba ndị ọzọ, a dọrọ ndị na-anya ụgbọ elu aka ná ntị na ha ga-adị njikere maka ohere na nnyonye anya sitere na ndị na-ebugharị 5G na nkà na ụzụ ndị ọzọ nwere ike ime ka ụfọdụ ngwa nchekwa ghara ịrụ ọrụ,' na-atụ aro na ịbụ amanye idozi nsogbu 'nwere ike imetụta ọrụ ụgbọ elu.'
Otu ahia ikuku ikuku CTIA siri ọnwụ na netwọk 5G nwere ike iji ụdịdị ahụ n'enweghị nsogbu, na-atụ aka na mba 40 ebe ha na kọmputa nchekwa ụgbọ elu na-arụ ọrụ n'otu oge.
Njem ụgbọ elu US enweelarị nsogbu n'oge na-adịbeghị anya, na-enwe agụụ mgbe ọgbaghara na-efe efe na-emegide ndị ọrụ na ụkọ ụgbọ elu. Emeela ka ụkọ ndị a ka njọ site na ịgbasawanye ikike ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa n'ofe mba ahụ.